Soo dejisan Coco 7.4.3 – Vessoft
Chat, Isgaarsiinta Voice
Soo dejisan Coco
Coco – software ah si ay ula xiriiraan dadka isticmaala adduunka oo dhan. Coco awood u siineysaa inay u sameyso wicitaano cod iyo diri farriimaha qoraalka dagdag ah. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay ugu biiraan CHAT kooxda ama abuuro adiga kuu gaar ah oo ku yeedhi saaxiibo. Coco awood u diro smileys oo xiiso leh iyo sii dheereysato kala duwan. Software ka kooban feature ah, oo u ogolaanaya inay ka raadi users dhow iyo iyagoo aad ku dartid saaxiibo. Coco ayaa dareen leh oo si sahlan loo isticmaali interface.
Making wicitaanada codka
Waxay abuurtaa chat koox
Function in ay raadiso dadka isticmaala dhow
Coco Software la xiriira: